ကိုက်လန်ရွက်မှာ ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ မသိသေးဘူးမဟုတ်လား? – BaHuTuTa
ကိုက်လန်ရွက်မှာ ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ မသိသေးဘူးမဟုတ်လား?
January 17, 2021 admin Health, Lifestyle 0
ကိုက်လန်ကို ဟင်းချက်စရာဟင်းသီးဟင်းရွက်အဖြစ်စားသုံးလာကြတာဆိုပေမဲ့ တစ်ချို့က ကိုက်လန်ရွက်ဟာ အသားအရည်နဲ့ဆံသားအတွက်အထူးကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာ မသိကြသေးပါဘူး။ကိုက်လန်ရွက်ဟာ အလှအပအတွက်လည်းအသုံးဝင်နေတာပါ။ဘယ်လိုအသုံးဝင်နေလဲဆိုတော့…
ကိုက်လန်ရွက်ကို တစ်ပတ်သုံးခါလောက်ချက်ပြုတ်စားသောက်မယ်ဆိုရင် ကိုက်လန်ရွက်ဟာ ကိုယ်တွေရဲ့နုပျိုမှုကိုထိန်းထားပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။အရေးအကြောင်းတွေ၊အမည်းစက်တွေ၊အစက်အပြောက်တွေကို လျော့ပါးစေပါတယ်။ဗီတာမင်စီနဲ့ တစ်ခြား antioxidant တွေပါဝင်တာကြောင့် ဆဲလ်တွေပျက်စီးတာကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေလည်းဖယ်ရှားပေးလို့ကျန်းမာလှပတဲ့အသားအရည်ကိုပိုင်ဆိုင်လာစေပါတယ်။
ကိုက်လန်ရွက်ဟာ အသားအရည်နဲ့ပတ်သက်လာရင် ပိုပြီးအကျိုးအာနိသင်ရှိတယ်ပြောရမှာပါပဲ။အသားအရည်ပျက်စီးတာတွေဖြစ်လာရင် ကိုက်လန်ရွက်စားသုံးပေးတာနဲ့ပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။နေရောင်ခြည်ကြောင့်ပျက်စီးတဲ့အသားအရည်မျိုးကိုဆဲလ်တွေပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။အမျှင်ဓာတ်လည်းကြွယ်ဝတာကြောင့် အသားအရည်အတွက်ကောင်းမွန်စေတဲ့ အတွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေအတွက် အထူးကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ကိုက်လန်ဟာ ဆံပင်အတွက်ရော အသားအရည်အတွက်ပါအသုံးဝင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးပါပဲ။ကိုက်လန်မှာ ပါဝင်တဲ့ phytonutrients ၊ polyphenolsစတဲ့ကွန်ပေါင်းဓာတ်တွေ၊ဗီတာမင်စီ၊ဗီတာမင်ကေစတဲ့ antioxidant တွေဟာ ဦးရေပြားအတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေဖြည့်ပေးပြီး ဆံပင်သန်စွမ်းစေပါတယ်။ဆံပင်ဖြူတာကိုလည်းနှေးစေပြီးဆံပင်ကျွတ်တာ၊ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်တာတွေကိုလည်းလျော့နည်းစေပါတယ်။
ဦးရေပြားပေါ်မှာဝက်ခြံထွက်တတ်ရင် ကိုက်လန်ကအကောင်းဆုံးသဘာဝဆေးတစ်လက်ပါပဲ။ကိုက်လန်ကို ပုံမှန်တစ်ပတ် နှစ်ခါ သုံးခါစားသောက်ပေးတာဟာ ဦးရေပြားပေါ်မှာဝက်ခြံထွက်တာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုက်လန်မှာ ဗီတာမင်စီ၊ဗီတာမင်ကေနဲ့ တစ်ခြားသောဓာတ်မျိုးစုံပါဝင်တာကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက လူများစွာကြုံနေရတဲ့ အရေပြားပြဿနာတစ်ခု ဝက်ခြံကို လျော့ပါးသက်သာစေပါတယ်။ဝက်ခြံတွေဟာ ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့မှု၊အဆီပိုလျှံမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားလာတာပါ။ကိုက်လန်ကို စားပေးမယ်ဆိုရင် အဆီပြန်တာကိုလည်းထိန်းသိမ်းပေးသလို ချွေးပေါက်တွေကိုသန့်စင်ပေးလို့ ဝက်ခြံဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေ၊အညစ်အကြေးတွေကိုလည်းသန့်စင်ပေးလို့ အသားအရည်အတွက် အထူးကောင်းစေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အဓိကလိုအပ်တာကရေဓာတ်ပါပဲ။ရေပုံမှန်မသောက်ဖြစ်ဘူးဆိုရင် ထမင်းစားတဲ့အခါကိုက်လန်ရွက်များများစားပေးပါ။ကိုက်လန်ရွက်မှာရေဓာတ် ၈၀ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်လို့ အရေပြားချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့တာတွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပြီး အသားအရည်လှပလာစေပါတယ်။ရေဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့အတွက် ပင်ပန်းမှုတွေလျော့ပါးပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွလာစေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကအဆိပ်အတောက်တွေပါ ကင်းစင်စေလို့ ဟင်းချက်စရာဟင်းသီးဟင်းရွက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူတဲ့အခါကိုက်လန်က ဦးစားပေးဝယ်ယူစားသုံးပေးသင့်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူအများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ သမိုင်းထဲက တွင်း ၁၀၀ ( သို့မဟုတ် )သမိုင်းပျောက်နေသော တွင်း ၁၀၀
Photoshop လို့မပြောရင် ဒီပုံတွေကို တကယ်ထင်နေမှာ…